ရော့ခ်ဂီတ အဆိုတော်တဦးဖြစ်တဲ့ အဆိုတော် ရေမွန်ဟာ ယနေ့၊ ဇွန်လ ၂၃ ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းက ငှက်ဖျားရောဂါကြောင့် ကွယ်လွန်သွားကြောင်း သိရပါတယ်။
အသက် ၃၂ နှစ်အရွယ်၊ အဆိုတော် ရေမွန်ဟာ ဦးနှောက်ထဲ ငှက်ဖျားပိုးဝင်ကာ ကွယ်လွန်သွားတယ်လို့ သူ့နဲ့ နီးစပ်ရာ အနုပညာအသိုင်းအဝိုင်းက အတည်ပြု ပြောဆိုထားပါတယ်။
ရေမွန်ဟာ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်းက သူ့ရဲ့ တတိယမြောက် Album “လူအဂီတ” တေးစီးရီး ထွက်ရှိခဲ့ပြီး၊ မကြာသေးခင် လပိုင်းအတွင်းက အဆိုတော် ကျားပေါက်၊ ဟန်နေတာ၊ နိုဗန်ထူးတို့နဲ့အတူ “Headshot” ဆိုတဲ့ သီချင်းကို ဖန်တီးခဲ့ပါသေးတယ်။
Idiots Band ရဲ့ ပင်တိုင်အဆိုတော် ရေမွန် ကွယ်လွန်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူ့ကို ချစ်ခင်ကြတဲ့ ဂီတအသိုင်းအဝိုင်းမှ အနုပညာရှင်များက အခုလိုပဲ စိတ်မကောင်းစကားများ ဆိုထားကြပါတယ်။
“အခုထိ မယုံနိုင်သေးဘူး ကျနော့်ရဲ့ အချစ်ဆုံး အစ်ကို”
“Rest in Power My Bloody Brother”
အဆိုတော် ဟန်နေတာ၊ နိုဗန်ထူး၊ ရေမွန်နဲ့ ကျားပေါက်
“Today I lost another brother, best friend andasoldier I used to fight together with. Wai Mon Oo Raymond, rest in power Brother. Your departure is gonna fuck me up for many coming decades.”
“မျှော်လင့်မထားတဲ့ သတင်းဆိုးတခုကို ကျနော်တို့ ကြုံလိုက်ရပြီဗျာ။ ကျနော်တို့ရဲ့ Raymond ဘဝ တပါးသို့ ကူးပြောင်းသွားပါပြီ။ စိတ်ထားကောင်းတဲ့ Raymond။ ကောင်းမွန်တဲ့ ဘုံဘဝ ရောက်မှာပါ သူငယ်ချင်း။ Rest In Power Brother”
“ငါတို့နောက်ဆုံး စကားလှမ်း‌ပြောလိုက်ရတုန်းက ဒါနောက်ဆုံးတွေ့တာလို့ ဘယ်ထင်မှာတုန်း တွတ်ပီရေ။ RIP”
“ဟာဗျာ လုံးဝရှော့ခ်ပဲ တွတ်ပီရေ။ သတင်းဖတ်ရတဲ့အချိန်မှာ ကြက်သီးတောင် ထမိတယ်။ ကောင်းရာ ဘုံဘဝ ရောက်ပါစေ”
“My heart is broken တွတ်ပြီရေ။ ငါသိပ်ချစ်ရတဲ့ သူငယ်ချင်းကို ဒီလို အစောကြီး ခွဲခွာရမယ်လို့ ငါအိပ်မက်တောင် မမက်ဖူးဘူးဟယ်။ ဒါငါတို့ပြောပြောနေကျ ဘဝကြီးလား။ Rest In Peace ပါသူငယ်ချင်းရယ်။ တနင်္လာနေ့က စကားသေချာ ပြန်မပြောလိုက်နိုင်တာ ငါနေမကောင်းလို့ပါဟာ”
“စိတ်ဖြောင့်ဖြောင့်သာ ချန်ခဲ့ပါ အစ်ကိုရေ။ သူဒီပုံလေးတင်တုန်းက Save ထားခဲ့မိတာ။ အခုဒီအချိန်မှာပြန်တင်ရလိမ့်မယ်လို့ မထင်ခဲ့ပါဘူး။ ရုတ်တရက် နှုတ်ဆက်သွားတဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အနုပညာရှင်တဦး၊ သူဖန်တီးသော အရာများ၊ လေးစားမြတ်နိုးမိသော သူရဲ့ပရိသတ်များ (ကျမ အပါအဝင်) ဝမ်းနည်းငိုကြွေးကြရပါတယ်။ REST IN PEACE, REST IN POWER BROTHER.”
Topics: Idiots, ရော့ခ်ဂီတ, အဆိုတော် ရေမွန်